खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही - Sankalpa Khabar
७ माघ १२:३४
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । केही दिनयता बजारमा खाने तेलको मूल्यमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको गुनासो आएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाबारे सञ्चारमाध्यमले के लेखे ?
१२ फाल्गुन ०९:२४
सर्वोच्चको फैसला : राष्ट्रपति भण्डारीलाई सच्चिने अवसर
१२ फाल्गुन १३:११
कस्तो रहँला आगामी तीन दिनको मौसम ?
१० फाल्गुन ०८:०९
ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनालले विश्राम लिए एक रहला…
१४ फाल्गुन १२:१२
मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने
९ फाल्गुन १४:१६
जसपाका नेताहरुसँग प्रचण्ड–नेपालको भेटवार्ता जारी
१३ फाल्गुन १०:३१
थप ८८ जनामा कोरोना पुष्टि,१३६ जना संक्रमण मुक्त
८ फाल्गुन १६:४०